အထက်ပါ အဆို့ရှင်သည် သဘာဝကျကျဖွဲ့စည်းမှုရှိခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှု အသွင်အပြင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းသည်မည်သည့်ဦးတည်ချက်ကို မဆိုပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Detail at. . . . . http://www.kingmyanmar.com/en_US/scaffolding-t-head-prop/
<p>- အဆောကျအဦးတှေ ဆောကျလုပျတဲ့အခါ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ငွမျးနဲ့ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျသုံး ဆကျစပျအပိုပစ်စညျးမြားကို Htet Oo Scaffolding &amp; Building Supply Co.,Ltd မှာအစုံအလငျ ရရှိနိုငျပါတယျ။</p><p>- ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးတိုငျး အတှကျ အရေးအကွီးဆုံးအရာက ခိုငျခံ့သပျရပျဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဆောကျလုပျရေးလုပျသားတိုငျးရဲ့ အသကျက လုပျငနျးခှငျထဲမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးမြား ခိုငျခံ့မှုရှိမရှိပျေါ အမြားကွီးမူတညျပါတယျ။&nbsp;</p><p>- Htet Oo Scaffolding တှငျ ငွမျးပိုကျ၊ငွမျးကလဈ၊ငွမျး၊တီတိုငျ၊အိုငျတိုငျနှငျ့ ငွမျးဆကျပစ်စညျးမြိုးစုံတို့ကို တဈနရောတညျးတှငျ စုံလငျစှာ ဝယျယူနိုငျပါတယျ။&nbsp;</p>
<p>- အဆောကျအဦးတှေ ဆောကျလုပျတဲ့အခါ မရှိမဖွဈလိုအပျတဲ့ ငွမျးနဲ့ ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးခှငျသုံး ဆကျစပျအပိုပစ်စညျးမြားကို Htet Oo Scaffolding &amp; Building Supply Co.,Ltd မှာအစုံအလငျ ရရှိနိုငျပါတယျ။</p><p>- ဆောကျလုပျရေးလုပျငနျးတိုငျး အတှကျ အရေးအကွီးဆုံးအရာက ခိုငျခံ့သပျရပျဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဆောကျလုပျရေးလုပျသားတိုငျးရဲ့ အသကျက လုပျငနျးခှငျထဲမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးမြား ခိုငျခံ့မှုရှိမရှိပျေါ အမြားကွီးမူတညျပါတယျ။&nbsp;</p><p>- Htet Oo Scaffolding တှငျ ငွမျးပိုကျ၊ငွမျးကလဈ၊ငွမျး၊တီတိုငျ၊အိုငျတိုငျနှငျ့ ငွမျးဆကျပစ်စညျးမြိုးစုံတို့ကို တဈနရောတညျးတှငျ စုံလငျစှာ ဝယျယူနိုငျပါတယျ။&nbsp;</p><div><br></div>
-Steel, electro-galvanized - British standard, for BS4568 Conduit - Factory,good quality material with low prices Bar Saddle ကဲ့သို့သော Galvanised Steel.(Hexagon Lock Nut,Flexible Tube Adaptor,Dome Cover,Circular Box lid Cover,Ball &amp; Socket ,Aluminium Conduit Socket များအား Sizes စုံလင်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ချိုသာသောဈေးနှုန်း ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးနှင့်တာရှည်အကြမ်းခံမှုတို့ကြောင့် ဝယ်ယူသူများစိတ်ကျေနပ်စေသော ကျွန်တော်များ MMB Electric ကိုသာ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Cabinet Monobloc stainless steel cabinet. All internal angles have been rounded for easy cleaning. Insulation with high density polyurethane 60 mm thick. The shelves are supported on stainless steel guides capable of holding heavy specimens . The cooling system and controls are located in the top of the cabinet for easy inspection and maintenance. Thermostatic unit The cooling group, CFC free, is oversized for maximum reliability. It is designed to condition the air circulating in the cabinet. The cooling circuit is entirely made of copper and is completed with dewater/receiver filter, spy glass to verify the passage of Freon, high pressure manostat and inlet connectors. The evaporator has the same characteristics of the condenser. The de-humidification is obtained byasmooth tube with cyclic thaw. The heating element consists ofastainless steel finned tube withalimit thermostat. Control console The front panel includesalarge digital display with switches and alarm leds. A multifunction control unit displays simultaneously the set points and absolute output values. Temperature sensor The PT100 sensor is movable inside the cabinet area and xcan also be located inside the test sample conforming to specific Standard requirement. Humidity sensor Allows measurements of humidity up to RH 100%
Scaffolding Frame (ငြမ်းဆက်စပ်ပစ္စည်းမျိုးစုံ)
<p>လူကြီးမင်းတို့၏ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုလျှက်ရှိသော ငြမ်းဘောင်၊ အခင်းပြား၊ ငြမ်းလှေခါး၊ အရစ်တိုင်၊ ငြမ်း၊ ငြမ်းပိုက်၊ ငြမ်းကလစ် နှင့်&nbsp; အစရှိတဲ့ငြမ်းဆက်ပစ္စည်းမျိုးစုံကို အရည်အသွေးတိကျမှန်ကန်ဈေးနူန်းချိုသာစွာဖြင့်ဖြန်ချီရောင်းချပေးလျှက်ရှိသည်။<br></p>
<p>လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော ငြမ်း၊ Tတိုင်၊ ငြမ်းခင်းပြား၊ ငြမ်းပိုက်၊ ငြမ်းကလစ်၊ ငြမ်းဘီး၊ ဗီယက်နမ်GI ဟော်လိုပိုက်များ၊ ဟင်ဂလန်၊ Uဘင့်၊ Hဘင့်၊ တို့ကို Forever Steel Company မှ တိုက်ရိုက်တင်သွင်း ဖြန့်ချီရောင်းချပေးနေပါသည်။<br></p>
<p>အဆောက်အဦးများအတွက် GI hollow /MS hollow (ဟော်လို) သံပိုက်များကို အထူအပါးဆိုဒ်မျိုးစုံကို ဈေးနှုန်းချိုသာစွာနှင့် လက်လီလက်ကားဝယ်ယူရရှိနိုင် ပါပြီခင်ဗျာ..........<br></p>